Nepse Online मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीकाे आईपीओमा दोस्रो दिनसम्म कतिको पर्यो त आवेदन ? – nepseonline
Tuesday 05-24, 2022, 7:04 pm
मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीकाे आईपीओमा दोस्रो दिनसम्म कतिको पर्यो त आवेदन ?
काठमाण्डौ । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले आयोजना प्रभावित र सिन्धुपाल्चोकका अन्य क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निष्कासन गरेको आईपीओमा दोस्रो दिनसम्म पौने ६ लाख बढी कित्ताका लागि खरिद आवेदन परेको छ। आज (बुधबार)सम्म यो आईपीओमा प्रभावित क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका गरी कुल ३ हजार ३६९ आवेदकबाट ५ लाख ८८ हजार ३६० कित्ता खरिद आवेदन परेको छ ।
आज बैंकिङ समयसम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रका २७१ आवेदकले ७७ हजार ८९० कित्ता खरिदका लागि आवेदन दिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रबाहेक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ३ हजार ९८ आवेदकबाट कुल ५ लाख १० हजार ४७० कित्ताका लागि खरिद आवेदन परेको हो।
आयोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीयका लागि निष्कासन गरिएको आईपीओमा छिटोमा जेठ ४ गतेभित्र र ढिलोमा जेठ २० गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। स्थानीयले न्यूनतम ५० कित्ता तथा अधिकतम ४०० कित्तासम्मको लागि दरखास्त दिन पाउनेछन्।
कसरी दिने त आबेदन ?